हातको बुढी औँलाले बताउँछ तपाइको स्वभाव । जान्नुहोस् - Nepal Insider
Home/समाचार/हातको बुढी औँलाले बताउँछ तपाइको स्वभाव । जान्नुहोस्
हातको बुढी औँलाले बताउँछ तपाइको स्वभाव । जान्नुहोस्
एजेन्सी । आजभोलि इन्टरनेटमा मानिसहरू आफ्नो व्यक्तित्व जान्नको लागि निकै उत्सुक हुने गरेको पाइन्छ । हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्गहरूजस्तै हातको औलाले पनि तपाईँको बारेमा धेरै कुरा भनिरहेको हुन्छ । धेरैलाई आफ्नो शरीरका अङ्गहरूको बनावटको आधारमा आफ्नो बारेमा जान्न मन पनि लाग्छ । जान्नुहोस् हातको कस्तो औँला हुनेहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ । हेर्नुहोस् तपाईँ पनि तपाईँको औँला अनुसार तपाईँको स्वभाव कस्तो ?
एकदम प्रोफेसनल, सफलता प्राप्ति गर्ने र यस्ता व्यक्तिहरुको जीवन एकदम व्यवस्थित हुन्छन् । यिनीहरु एकदम अनुशासनमा बस्छन् । यिनीहरुको जीवनको लक्ष्य भनेको धेरै पैसा कमाउनु र इज्जत कमाउनु हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरु एकदम घमण्डी, स्वार्थी र अहंकारी हुन्छन् । आफ्नो जीवनको एक मिनेट पनि खेर जान दिदैन। देखाउनको लागि कसैलाई पनि सहयोग गर्दैनन् । यदि कसैले माग्न आएमा अस्विकार पनि गर्दैनन् । काम नगर्ने कुरा मात्र गर्ने मान्छे उनिहरुलाई पटक्कै मन पर्दैन ।
उनीहरूको वैवाहिक जीवनमा श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध एकदम राम्रो हुन्छ । बच्चा पनि राम्रो हुन्छन् । तर आफन्त साथी भाईसँग भने सम्बन्ध नराम्रो हुन्छ किनकि प्राय मान्छेहरु उनलाई एकदम स्वार्थी ठान्छन् । आफ्नो समस्या कहिले अरुलाई नसुनाउने भएका कारण यस्ता व्यक्तिलाई साथी भाई आफन्तले नराम्रो मान्ने गर्छन् ।
यदी जीवनमा जिन्दगीको अरुबाट मज्जा लिन मन छ भने यस्ता मान्छेकोसँग जानुहोस् । यस्ता मान्छे आफ्नो काम गर्न मन पराउँछ । यदि काममा गए पनि त्यहा सबैको मन जित्न सफल हुन्छन् । हरेक काममा सकरात्मक सोच लिन्छन् । वैवाहिक जीवन एकदम सुखमय हुन्छ। तर नोकरीको मामिलामा भने अलि अफ्ट्यारो पैदा हुन्छ । उनीहरु इमान्दारीले भरिपूर्ण हुन्छन् । जीवनलाई गम्भीर रुपमा सोच्छन् । नोकरीमा टिकिरहन उनलाई गाह्रो हुन्छ । तर व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहेमा एकदम लाभ उठाउन सक्छन् ।
यस्ता मान्छे अलिकति पनि घमण्डी हुदैनन, स्वार्थी पनि हुदैन् एकदम गाई जस्तै सोझ हुन्छन् । जस्तो सुकै समस्या आएपनि तुरन्तै समाधान गर्न सक्छन् । यस्ता मान्छे अरुलाई गफ गर्न मन पर्दैन अरुलाई पछाडीबाट सहयोग गर्न तयार हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक एकदम फाप्छ । ठुलो मान्छे बन्ने सम्भाना हुन्छ तर जीवनमा आर्थिक समस्या भने आइ परिरहन्छ । यस्ता समस्या आइ परे पनि समस्या समाधान गर्न सफल हुन्छन् ।
घर जग्गा बेचेर २०० + सडकका कुकुरलाई आफ्नै सन्तान जसरी पाल्दै यी महान नारी (हेर्नुस भिडियो)
समिक्षा अधिकारीको तिज गित ! ( भिडियो सहित )
रवि र निकिताको बिहेमा कुलमान र रमेश प्रसाई जाँदा सन्दिपले यसरी हँसाउनु हँसाए, जब यस्तो सम्म भने… (भिडियो सहित हेरी शेयर गर्नुहोस्)
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालका राष्ट्रपति भण्डारीलाई फोनमा के भने ?